UGabriel García Márquez ngamaxesha eMidlalo yeTrone | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Ababhali, I fantasy, Iintlobo, Iincwadi, Inoveli, Amabali, Ezahlukeneyo
UGabriel García Márquez, ophumelele imbasa yeNobel yoNcwadi.
Ubunyani bobugqi bukhona kuzo zonke iinkcubeko. Umntu uyile ngokwendalo, indlela yakhe yokuqala yokubonisa yayizobe, ke kusengqiqweni ukucinga ukuba uhlala ecinga kwaye edala izidalwa zasentsomini ezikhula ngendlela eqhelekileyo yonke imihla.
George RR Martin Ubhale uthotho lweenoveli ezimnandi ezingqongwe yinyani yomlingo. Iimfazwe eziyintsomi ezifana neemfazwe zokwenyani, ubuhlanga obunqabileyo obuthandwayo kwiscreen, izilwanyana ezintle umntu wonke angathanda ukuzazi ukuba ngumdlalo weZihlalo zobukhosi onempumelelo enkulu. Kwicala lakho, kwaye ngexesha lakhe, UGabriel García Márquez ubhale Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa. Inoveli ikwanemfazwe ezingunaphakade, ukubulawa kwabantu ngendlela engaqhelekanga kunye namabali ezilwanyana ezinomdla ezingekhoyo.
1 Ukufana phakathi kweMidlalo yeTrone kunye neMinyaka Elikhulu yokuZodwa
3 Imvelaphi efihliweyo
4 Abantwana besihlobo, abantwana bastard
5 Malunga neMidlalo yeTrone
Ukufana phakathi Umdlalo weTrone y Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa
Nangona kungenakuqinisekiswa ukuba i-RR Martin imfundile uGabriel García Márquez, ukufana ngokubanzi phakathi kwala mabali mabini kubonakala kubonisa ukuba kunokwenzeka.
Izinto ezicacileyo njenge umbulo, umjikelo wosapho, iimfihlelo malunga nemvelaphi yabalinganiswa, umlingo wehlobo kunye namashwa ebusika, Bakho kuzo zombini. Nangona kunjalo, kukho olunye unxibelelwano olungabonakaliyo kangako ngeliso lenyama, kwaye oko kunomdla wokungena kuwo.
Incest njengomxholo ophambili uyabonakala kuyo yomibini imisebenzi. Ngelixa uMartin eqhubeka kancinci ngokulala phakathi kwamawele, uMarquez uza kufutshane kakhulu neli tyala ibonakaliswa luthando phakathi kukaRebeca kunye nomntakwabo uJosé Arcadio Mholweni emini nje. Nangona kunjalo, kuwo omabini la matyala ashushu, abukhali, anzulu, athandana nothando.
Zombini iCersei, kwi Umdlalo weTrones, NjengoRebeca, kwi Iminyaka elikhulu yokuba nesizungu, balahlekelwa ziingqondo zabo ngenxa yothando olungavumelekanga lwabazalwana baboBobabini bahlala elubhacweni, nangona ngeendlela ezahlukeneyo. Okokuqala, ngokungakwazi ukuhlala ngokukhululekileyo uthando lwakhe; Okwesibini, xa wagxothwa kusapho lakwaBuendía ngokutshata kunye nokuzinikezela.
Olunye ulwalamano phakathi kwabantu abathandanayo oluphindaphindiweyo kokubini kwinoveli enye kunye nolunye, yile ikwenzeka phakathi kuka-anti nomtshana. Ekuqaleni kwe- Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa, Amaranta ufuna intuthuzelo kwiingalo zomtshana ongaphezulu kwesinye, nangona engabusebenzisi obu budlelwane, ubaphawula bonke ubomi.
Kodwa Ubudlelwane buka-Aureliano Babilonia kunye nomakazi wakhe u-Amaranta Úrsula, kwaye ikhula njani, iyafana kakhulu ne ze UDaenerys Targaryen kunye nomtshana wakhe uAegon Targaryen, eyaziwa ngokuba nguJon Snow.
Iminyaka Elikhulu yokuba wedwa, umsebenzi wobugcisa kaGabriel García Márquez.
UJon Snow kunye no-Aureliano Babilonia banezinto ezifanayo kakhulu kunothando lwabazala babo. Bobabini baxokiswa malunga nemvelaphi yabo, bebakhanyela inyani yokuba bavelaphi.
U-Aureliano Babilonia akaze achazwe ukuba ngoobani abona bazali bakhe. Ukhula ekholelwa ekubeni nguBuendía, unyana kaFernanda Del Carpio kunye no-Aureliano Segundo Buendía, kodwa ekupheleni komdlalo ufumanisa ukuba ungumzukulwana wabo ngenene, kuba umama wakhe wayenguRenata Remedios kunye notata wakhe uMauricio Babilonia.
UJon Snow uxokisiwe, emxelela ukuba ungunyana kaEddard Stark kunye nehenyukazi eligama linguWylla. Kwakhona, kwinqanaba lokugqibela loluhlu, uJon ufumanisa ukuba ngunyana kaLyanna Stark - Udade kaEddard- kunye noRhaegar Targaryen, ke igama lakhe lokwenyani nguAegon Targaryen.
Abantwana besihlobo, abantwana bastard
Amadoda angamagorha ane-aura yamanzi ayinkcenkceshela ngembewu. URoberth Baratheon, ukumkani oqala ngaye, unabantwana abangamakhwenkwe kulo lonke uKufika kukaKumkani.
UColonel Aureliano Buendía wayenee-bastards ezili-17, awazala ngexesha leemfazwe ezingama-32 awazikhokelayo waza waphulukana nazo. Kuwo omabini la mabali, ii-bastard ziyabulawa, kushiyeke umntu omnye osindileyo. Vula Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa, ekugqibeleni, lo uyafa ebulawa. Akukaziwa okwangoku ukuba yintoni eza kwenzeka ngoGendry, kodwa ayizothusa into efanayo ukuba yenzeke.
UCersei noJaime Lannister bayakwazi ukuba nabantwana abasempilweni, nangona bephawulwe ngombulo. Ubuhlanya, inkohlakalo kunye nobuthathaka ziphawula abantwana besi sibini, kanye njengoko bephawula abantwana bakaJosé Arcadio Buendía no-Úrsula Iguarán.
UAurelian wokugqibela, unyana ka-Aureliano Babilonia kunye no-Amaranta Úrsula, izalwe inomsila wehagu eyoyikekayo kwaye ityiwa ziimbovane. Phakathi kweethiyori ezaziwa kakhulu malunga noJon noDaenerys, omnye wonyana wabo owayeyinamba yenamba wema ngaphandle. Kwakhona, uphawu lophawu lomtshato emsileni.
Malunga neMidlalo yeTrone
Ibhalwe ngo-1996 nguGeorge RR Martin, Umdlalo weTrone (Umdlalo weetrone), yinoveli yokuqala kuthotho olubizwa Ingoma yomkhenkce nomlilo. Phumelela imbasa yeLocus yeMbali yeNoveli emnandi ngo-1996, kwaye ngo-2003 ibhaso le-Ignotus leyona noveli yamanye amazwe
Ngo-1996 uMartin waphumelela iBhaso likaHugo ngeNoveli eNcinci eMfutshane ngeGazi leNyoka. Kwi-2011 uthotho lomdlalo weTV kumdlalo weTrone waqala kwi-HBO, ephela kulo nyaka we-2019. Ngokomgaqo, uthotho lwalune-RR Martin njengenxalenye yababhali be-script, nangona kunjalo, kwisizini ephelileyo wayengekho.
UGeorge RR Martin, umyili weMidlalo yeTrone.
UGabriel García Márquez noGeorge RR Martin ngabazali bezinto eziyimilingo, kwiindawo ezahlukeneyo kunye namaxesha ahlukeneyo. Izinto ezifanayo zininzi kangangokuba kunzima ukuzifaka ngoonobumba abambalwa, kodwa kuyonwabisa kwaye kuyonwabisa ukuzifumana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » UGarcía Márquez ngamaxesha eMidlalo yeTrone
IBhabheli ??? !!!!
Esona sichazi-magama sesiLatin, kunye nezinye izixhobo zokufunda olu lwimi